Dhallinyarada Wax-Qorista jeceley, Wax Aan idin Ku La Dardaarmayaa: | HAYAAN NEWS
Dhallinyarada Wax-Qorista jeceley, Wax Aan idin Ku La Dardaarmayaa:
Inta aad yar tahay, inta aadan qoraa noqon, awood badan saar korinta garaadkaaga, aqoontaada iyo waaya’aragnimadaada. Ogowna inta aad wax taqaan waxna og tahay in la’eg ayuun baa ka muuqan doonta halabuurkaaga iyo qoraalkaaga hadhow.
Dhiganayaasha tayada qoraalkoodu hagaagsan tahay kolka aad akhriyayso, weligaa u fiirso sida ay u qoran yihiin. Tusaale ahaan u fiirso oo baro sida loo adeegsado astaamaha qoraalka iyo meelaha la geliyo. U fiirso jaadadka qoraalku waxa ay ku ka la duwan yihiin, tusaale sheeko faneed, sheeko gaaban, ruwaayad, dood fikir, taariikh, cilmibaadhis, saynis iwm.
Xooji oo hodmi Af Soomaaliga aad wax ku qorayso, ogowna hadba luqaddaada inta aad ka taqaan in la’eg buu halabuurkaagu qurxoonaadaa oo yoolkiisa gaadhaa. Dhanka kalena ogow qoraalku, siiba curinta suugaantu, waa dheefta afku ku beermo, waana madxafka kaydiya erayada lumi lahaa.
Wax ka qor maaddo aad xogteeda iyo aqoonteeda lee dahay, iskana ilaali gelista arrimo aadan aqoon iyo waaya’aragnimo ku gu filan u lahayn. Inta aad yar tahay wax ka qor arrimaha nafsiga ah ee dareenkaaga ku jira, sida in aad halabuur ka curiso qisooyinka jacaylka iyo waayaha barbaarnimo.
Kolka aad wax akhriyayso iyo marka aad wax qoraysaba, fur maskaxdaada oo fahankeeda iyo curinteeda ha hagran ee idilkeed fasax. Waxa aad adigu xaq iyo dan bani aadamnimo u aragto dhihisteeda cidna ha ka ga haybaysan. Ogowna nolosha dunidu weligeed wax iska ma beddeleen haddii aanay jiri lahayn dad leh kudhac maskaxeed oo waxii hore wayddiin geliya wax kalena ka soo saaray.
Halabuurkaaga ka ilaali cadaawad hoosaysa, ama in aad qof iyo qolo gaar ah si xaqdarro ah u gu dhaawacdo. Ogowna halabuurnimadu in ay tahay xil.
Goor walba xusuusnow halabuurkaagu in uu u taagan yahay oo matalayo ilbaxnimada umaddaada, gudo iyo debedba. Sidaa darteed ka ilaali in aad isla iyada ku waxyeellayso ama ku ka la ximiso. Ogow soomaalidu si wal oo ay siyaasadda maanta u gu qaybsan tahay ilbaxnimadeeda iyo aayaheedu waa mid qudha oo ay tahay in ay isu kaashato ilaalinteeda iyo xoojinteeda. Yeelo feejignaan iyo wacyi aad xilkaa ku gudato. Ha ismoodsiin weligaa samafal shisheeye in uu dhaqanka kuu horumarin karo, waayo ummaduhu wax kale oo walba waa ay isa siiyaan laakiin ilbaxnimada isma siiyaan ee waa ay isu gu faanaan oo isku qabsadaan.
U gu dambayn fikirka iyo halabuurka kaa yimaadda haddii aad ku qanacsan tahay geesinnimo ku difaac, hana ka cararin marka cagaha dhulka la guu gu dhufto.